Booliiska canshuuraha oo baaritaan ku sameeyay dooni uu ku tamashlaynayay Cristiano Ronaldo! – Gool FM
(Formentera) 13 Luulyo 2017 – Laacibka Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid ayaa waxaa tamashlihii iyo nasiinadii ka jiirey booliiska canshuuraha ee dalka Spain kaddib karmii ay soo fuuleen doonida ay ku tamashleeynayo saacadihii ugu dambeeyay dalxiiskiisa.
Laacibka iyo doonidiisa ayaa ku sugnaa meel ka yara baxsa xeebaha Formentera oo ah jasiirad loo dalxiis tago oo ka tirsan jasaa’irka Balearic ee dalkaasi Spain waxaana mar qura soo fuulay 3 sarkaal oo ka tirsan booliiska canshuuraha oo watey doomaha dheereeya.
Cristiano Ronaldo ayaa la tamashleeynayay gabadha ay isku cindan yihiin ee Giorgina iyadoo sida ay qorayso saxaafadda Spanish-ku ay xitaa wehlinayeen mataanaha ugu dhashay qaabka bacrimiska ah.
Waxaa la sheegayaa inuu baaritaankani ahaa mid iska caadi ah oo lagu sameeyo dooniyaha ku sugan xeebaha Spain oo idil.
Cristiano Ronaldo ayaa dowladda Spain ugu eedaysan inuu lunsaday canshuur gaaraysa 14.7 milyan oo euro, isagoo lasoo gole joojin doono 31-ka Luulyo oo uu maxkamad leeyahay.
AC Milan oo doonaysa inay saxdo khalad ay horay u gashay! (€60m oo ay ku raadinayso Aubameyang)